DAAWO SAWIRRO: Ogow Ujeedka Xisbiyada Siyaasadeed oo ay ugu dhawaaqeen madal ay ku mideysan yihiin! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO SAWIRRO: Ogow Ujeedka Xisbiyada Siyaasadeed oo ay ugu dhawaaqeen madal ay...
DAAWO SAWIRRO: Ogow Ujeedka Xisbiyada Siyaasadeed oo ay ugu dhawaaqeen madal ay ku mideysan yihiin!
Muqdisho (Halqaran.com) – Xisbiyada kmg siyaasadeed ee dalka ka jira ayaa waxay Tallaadadii maanta Magaalada Muqdisho kaga dhawaaqeen madal siyaasadeed oo ay sheegeen in ay ku mideysan yihiin.
Xisbiyada siyaasadda oo shir ku yeeshay Magaalada Muqdisho ayay kaga dhawaaqeen madashan oo loogu magac-daray (Mashada Xisbiyada Qaran).
Madashan oo ay ku mideysan yihiin illaa toban xisbi ayaa waxaa Afhayeenka Kmg ee Madasha Xisbiyada Qaran loogu doortay Ex Xildhibaan Cabduladiif Muuse Sanyare.
Xisbiyada madashan ku bahoobay ayaa waxaa ka mid ah xisbiyada UPD, Himilo Qaran, Wadajir, Ilays, Horusocod, NDP iyo MBDA, waxaana goobta madashaan looga dhawaaqay ka sugnaa Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud.
Isbahaysiga ay iclaamiyeen xisbiyada kmg ee dalka ka dhisan ayaa waxay kaga sii dari kartaa mowjadaha siyaasadeed ee dalka, oo bilow u ah arrimaha doorashooyinka dalka ee sanadka soo socda.
Xasan Sheekh Maxamuud, Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore ku baaqay in shir la isugu yimaado, ka dib markii 22-kii bishii September ay dowladdu xanibtay diyaarad uu la socday Shariif Sheekh Axmed oo ku sii jeeday Magaalada Kismaayo.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa uu muujiyay in ay ka walaacsan yihiin habdhaqanka Dowladda Federaalka Somaliya, isla-markaana ay dalka dib ugu celinayso xilligii adkaa ee laga soo gudbay.
Xafiiiiska Halqaran.com, Muqdisho
madal ay ku mideysan yihiin
Ujeedka Xisbiyada Siyaasadeed